BBC Somali - Warar - Dad ku dhintey qaraxyo ka dhacey Ciraaq
Dad ku dhintey qaraxyo ka dhacey Ciraaq
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 3 Luulyo, 2012, 15:57 GMT 18:57 SGA
Tobonaan ayaa ku dhintey qaraxyo ka dhacey Ciraaq
Ugu yaraan 25 ruux ayaa ku dhintey 40 kalena waa lagu dhaawacey qarax ka dhacey suuq ku yalla magaalada Al-Diwaniya ee ku taalo dalka Ciraaq.
Dhowr ruux oo kale ayaa ku dhintey ama ku dhaawacmey qaraxyo kale oo ka dhacey magaalooyin kale oo dalkaasi ku yaala.
Magaalada Karbalaa waxaa ku dhintey affar ruux kadib markii baabuur lagu soo rakibey waxyaabaha qarxo lala beegsadey dadka haysta madhabka Shiicada oo cibaadeysanaayey.
Qaraxyada ka dhaco dalkaasi Ciraaq ayaa sare u kacey toddobaadkani. Bishii June ee tegtey ayaa noqotey bisha uu dhiiga ugu badnaa ku daatey dalkaasi tan iyo ciidamada Maraykanka ay halkaasi ka baxeen bishii December ee 2011.
Qaraxa Al-Diwaaniya waxaa uu ka dhacey suuq ku dhow masaajid ay Shiicadu ku ciibaadeystaan. Halkaasi waxaa ku arruraayey dad doonayey inay u Xajiyaan magaalada Karbalaa.
Dadka haysta madhabka Shiicada ayaa xusaya xilligii uu dhashey mid kamid Imaamyada Shiicada, waxayna isugu tegaan magaalada Karbala.
Aasiya Imran Khan oo dil ku eedeeyay MQM